धुमधामका साथ बाहुनकी छोरी र विश्वकर्माको छोराबीच भयो मागी बिवाह ! – " सुलभ खबर "
धुमधामका साथ बाहुनकी छोरी र विश्वकर्माको छोराबीच भयो मागी बिवाह !
इटहरी– समाज अहिले धेरै नै परिवर्तन भइसकेको छ । जातीय विभेद र छुवाछुत लगायतका सामाजिक विभेदहरु ह्वात्तै घट्ने क्रममा छन् । जसको पछिल्लो उदाहरण इटहरीमा देखिएको छ । जहाँ बाहुनकी छोरी र बिश्वकर्माको छोराबीच मागी विवाह भएको छ ।
इटहरी ५ आदर्श टोल निवासी उमेश सेन्च्युरी विश्वकर्मा र इटहरी ५ जनता वस्ती निवासी मिरा रेग्मीबीच परम्परागत रुपमा विबाह सम्पन्न गरिएको छ । रेग्मी र सेन्च्युरीको परिवारबीचमा सहमति भएपछि परम्परागत रुपमा दुई अन्तरजातीय समूहका युवा–युवतीबीच मागी विवाह सम्पन्न भएको हो ।
समाज रुपान्तरण गर्न परिवर्तन आफैबाट शुरु गर्नुपर्छ भन्ने उदाहरणलाई व्यवहारिक रुपमा देखाएका छन इटहरीका दुई युवा सामाजिक अभियन्ता रेग्मी र सेन्च्युरीले । रेग्मी र सेन्च्युरीको परिवारबीचमा सहमति भएपछि परम्परागत रुपमा दुई अन्तरजातीय समूहका युवा–युवतीबीच मागी विवाह गरेर समाजलाई चेतनामुलक सन्देश दिएका छन् ।
ननविवाहित जोडी उमेश र मिरा बाल्यकालबाटै सकारत्मक परिवर्तनका अभियन्ताहरु हुन । बाल समूहबाट स्थानीय स्तरमा स्थापित हुँदै कलमको माध्यमले जातिय विभेद र असमान मूल्य मान्यतालाई चिर्दै हानिकारक मनोविचार बिरुद्ध अभियानहरु संचालन गरी सामाजिक रुपमा स्थापित दुवै ससक्त युवा सहकर्मी हुन् ।
ब्राह्मण समुदायकी छोरी र र दलित समुदायको छोराबीच सम्पन्न भएको मागी विवाह जुन विरलै मात्रामा सुन्न देख्न पाइन्छ ।
सो अवसरमा नव दम्पतिलाई आशिर्वाद प्रदान गर्न इटहरीका अग्रज, समाजसेवी, मिडियाकर्मी,न्याकर्मी,महिला अधिकारकर्मी तथा सचेत युवाहरुको बाक्लो उपस्थित रहेको थियो । हर्षित मुद्रामा उपस्थिति जनाएका सम्पुर्ण समुदायका पाहुनाहरुले नवदम्पतीले अबको युवापुस्तालाई जातीय भ्रमदेखि उन्मुख हुनका लागि निकै ठुलो उदाहरण पेस गरेको भन्दै विवाहको शुभकामना दिए ।
समाजमा अहिले पनि जातीय छुवाछूत र अन्तरजातीय विवाहकै कारण निधनहुन पर्ने अवस्थामा आफुहरुले समाज रुपमान्तरणमा सफल र नमूना जोडीको सन्देश दिन दलित र गैरदलितबीचको मागी विवाह सुरु गरेको मिरा रेग्मीले बताइन् ।
मिरालाई साथ दिदै उमेश सेन्च्युरीले भने,‘ हामीले जस्तै मागी विवाहको सुरुवात सबै युवापुस्ताले गरे ,समाजको विभेद केही हदसम्म हट्छ । ’ आठ बर्षदेखि अध्ययनको शिलशिलामा अस्ट्रेलिया बसोबास गर्दै आएका नवदम्पतीद्वय सामाजिक न्यायका लागि सक्रिय छन् ।